Home Wararka Shacabka Guriceel oo baqdin ka qaba in dagaal ka dhaca magaaladaaas
Shacabka Guriceel oo baqdin ka qaba in dagaal ka dhaca magaaladaaas
Sida ay shegayaan wararka ka imanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in qoysas badan oo ku noolaa magaalada Guriceel ay bilaabeen inay ka barakacaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Guriceel. Barakaca ayaa la sheegay inuu yimid kadib dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo dhinacyada isku haya maamulka magaalada Guriceel.
Odayaal iyo waxgarad ku nool magaalada Guriceel ayaa ugu baaqay maamulka Ahlu Sunna inay kala baxaan magaalada ayna ku dul dagaalamin. Hase yeeshee maleeshiyaadka Ahlu Sunna ayaa isaga baxay deegaanka Ceeldheere oo u dhexeeya magaalada Dhuusmareeb iyo Guriceel.
Maleeshiyo daacad u ah AHlu Sunna ayaa todobaadkii labaad ayaa waxaa ay ku sugan yihiin Guriceel, waxayna difaacyo adag ka sameysteen gudaha iyo daafaha maagalada si ay isaga hortagaan weerar laga cabsi qabo inay ku soo qaadan magaalada ciidamada dowlada Soomaaliya.